Chorus Aviation dia manolotra fiaramanidina Airbus A220-300 roa ho an'ny airBaltic
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Chorus Aviation dia manolotra fiaramanidina Airbus A220-300 roa ho an'ny airBaltic
Desambra 24, 2020
Chorus Aviation Inc. nanambara androany ny fandefasana fiaramanidina Airbus A220-300 vaovao roa ho an'ny airBaltic any Latvia. Ny fiaramanidina (MSNs 55094 sy 55095) no singa roa farany amin'ny dimy napetraka amin'ny fampanofana maharitra miaraka amin'ny kaompaniam-pitaterana amin'ny alàlan'ny fifampiraharahana vita varotra sy leaseback izay nambara tamin'ny 20 Novambra 2019.
Tamin'ny Desambra 2013, AirBaltic no lasa mpandraharaha voalohany an'ny fiaramanidina A220-300 ary tamin'ny Mey 2020, natomboka indray ny kaoperativa ho toy ny kaompania Airbus A220 rehetra. "AirBaltic dia manohy manitatra soa aman-tsara ny serivisy aorian'ny krizy pandemika ary manolotra sidina mankany amin'ny toerana 65 mihoatra ny firenena telo avy any Baltika," hoy i Vitolds Jakovļevs, Chief Officer of Financial, airBaltic. “Ny fiaramanidina dia nahavita mihoatra ny nantenain'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, manome fahombiazana amin'ny ankapobeny sy ny fahombiazan'ny solika ary manome traikefa manidina tena tsara.”
“Mankasitraka ny fahombiazan'ny AirBaltic amin'ny laoniny sy ny fanitarana ny serivisy manerana an'i Eropa izahay,” hoy i Joe Randell, filoha sady Lehiben'ny Executive Executive, Chorus. "Ny fiaramanidina A220 namboarina kanadianina namboarina no mitarika ny andraikitra amin'ny fanampiana ireo kaompaniam-pitaterana an'izao tontolo izao hanohy ny asany satria mitombo ny filan'ny dia amin'ny fampiharana ny fitsapana haingana sy fizarana vaksinina hamerana ny fiparitahan'ny COVID-19. "
Ny marika Viking dia mitsingevana avy ao amin'ny sambo voalohany
Royal Caribbean Group dia nanambara fanendrena vaovao ho an'ny filankevi-pitantanana